Ukujonga ngokuqinileyo-i-NJ kunye ne-NY yeNdawo yokuThengisa, ukuKhuselwa, ukuKhuselwa kweNgcaciso kunye namaGqwetha abaGqithisi
ikhaya / Qinisekisa ngokubanzi
IiOfisi zoMthetho zikaPatel, uSoltis kunye noCardenas bamelwe ukuba babenetalente esemthethweni eNew York naseNew Jersey, kugxilwe kumacala angaphambili, ukulungiswa kwemali mboleko, ukungabinamali, ukuthengiswa kwezinto, kunye nokuthengiswa kwezindlu eNew Jersey. Ukuba ucinga unokufuna i NJ Ukuchazwa kwegqwetha or NY iGqwetha lokuGxilwa qala ngokuthetha nomnye MAHHALA namhlanje. Sisiseko esomeleleyo yosapho esigxile ekukhonzeni umntu ngamnye kunye namashishini abo. Nokuba ufuna ukuzikhusela ebusweni eNew York okanye eNew Jersey okanye kwintando yakho yentsapho. Sinolwazi olusemthethweni kunye nobuchule bakho. Inqanaba lokuqala lokulungisa nayiphi na ingxaki kukuqonda ukuba unokukhetha. Thetha negqwetha namhlanje malunga nazo zonke iinketho zakho.
Asizithathi zonke iimeko esizinikiweyo. Ukuba asinakuphumelela, siza kukuxelela. Siza kuphanda zonke iinketho zakho, kodwa ekupheleni kosuku, ukuba asikwazi ukukunceda, siza kukuxelela.
Sineegqwetha esijolise kwimiba eyahlukeneyo yomthetho. Sineelayisensi zamagqwetha eNtsha zaseJersey ezijolise kuKhuseleko lweNqanawa, ukuThengiswa kwePropathi, uBhengezo, ukuKhangela kunye nokuQokelelwa kwamatyala / ukudityaniswa. Sineelayisensi zamagqwetha eNew York ezigxila kuKhuseleko lweNqanawa, ukuThengiswa kwePropathi, uBhengezo, ukuKhangela, uMthetho wosapho kunye nokuQokelelwa kwamatyala / ukuDityaniswa. Xa unxibelelana nathi kuya kufuneka sidlane indlebe nawe kancinci ukuze uqiniseke ukuba uqhagamshele kwigqwetha elingakunceda umba wakho.
UNEXESHA-THOBELA USASA NAMHLANJE
Sinenkqubo ye-3 inyathelo lokuqinisekisa ukuba sinokukunceda, okanye sikumisele ukuba uthethe nelinye igqwetha elinoluhlu lwezibakala ezijikeleze imeko yakho. Siyaqonda ukuba sikulungele wonke umntu, kodwa siya kukunceda ukuze igqwetha elilandelayo onxibelelana nalo, ukwazi ukufikelela kwiimpendulo ozifunayo.
Ukuba ujonge ukufumana elona qela lamagqwetha aqonda iindawo ezininzi zomthetho eNew Jersey, siliqela lamagqwetha anamava aza kukuphatha ngokufanelekileyo njengomthengi. Sineegqwetha ezininzi ezisebenzisa umthetho ohambelana neMicimbi yeNdawo yokuThengisa, ukuBoleka, ukuKhuselwa komthetho wokuBhengeza, ukuLungiswa kweMali mboleko, ezona Ndlela zintle zokuThenga okanye ukuthengisa iiNtengiso zeNdawo, iMvume kunye noMmeli weGqwetha, uKhephe kunye neeNdawo zoMthetho, ukuNikwa ityala lokuTyholwa, ukuTyholwa kweMali, kunye neShishini Ukubhengezwa. Siya kukhusela amalungelo akho njengoko sisebenza njengeqela ukukunika uncedo lwenyani. Amagqwetha ethu ayaziqonda iindlela zonke ezi ntlobo zemicimbi ezinxibelelanayo. Siyakukhusela ubumfihlo bakho nokuba usitsalela umnxeba okanye usityelele kwenye yeeOfisi zethu ukuze kuboniswane nabo. Nokuba ukhetha ukunxibelelana njani nenkampani yethu, siza kuyikhetha ukhetho lwakho.
Sineeofisi kwiJersey City, NJ ngaphesheya kwe-Hudson County Courthouse; I-Hackensack, NJ ngeenxa zonke kwikona ukusuka kwiBergen County Courthouse; Inkululeko, i-NJ isezantsi kwesitrato esivela kwiNkundla yaseMonmouth County, Manhattan, NY enesiza saseMidtown New York City; kunye neBrooklyn, NY ngaphesheya kweKings County Courthouse esezantsi kwesitrato esivela kwinkundla yamatyala yaseBrooklyn yokuhlangana nabantu bethu. Sinikezela ngeengcebiso zasimahla kwamatyala amaninzi kuyo yonke imicimbi yenkundla eNew York naseNew York.
QHAGAMSHELANA NATHI kwaye siza kukwenzela izinto ze-3: